Super Mario 3 Apk Download Ho an'ny Android [2022 Update] | APKOLL
Raha tia lalao ianao, dia mety nilalao an'i Mario ary raha mbola tsy milalao azy ianao dia tsy mahita ny traikefa filokana tsara indrindra. Aza matahotra anefa, eto izahay miaraka amin'ny andiana Mario farany ho anao rehetra, izay fantatra amin'ny hoe Super Mario 3 Apk. Izy io dia fampiharana Android, izay manolotra traikefa tsara indrindra ho anao.
Araka ny efa fantatrao tamin'ny voalohany dia tsy dia misy lalao firy azo atao. Tsy maintsy mampiasa fitaovana filalaovana manokana ny olona mba hampandehanana lalao samihafa. Noho izany, tamin'ny 1985 dia tsy misy afa-tsy lalao 2D azo alaina ary i Mario bros dia mampiditra ny andiany voalohany amin'ity lalao ity, taorian'io taona io, dia nahazo ny lalao lafo indrindra hatramin'izay.
Tian'ny olona ny milalao azy io sy mankafy, miaraka amin'ny fotoana, misy fanavaozana samihafa natao tamin'ny lalao. Noho izany, misy kinova samihafa an-taonina nampidirina teny an-tsena, izay nitomboan'ny fahalianan'ny olona tamin'ity lalao ity. Tamin'ny taona 19 dia iray amin'ireo lalao nofinofisin'ny zatovo rehetra izy io.
Noho izany, hanohy ny filaharana eto izahay miaraka amin'ny kinova farany amin'ity lalao ity, izay manolotra fisie Apk. Noho izany, ankehitriny dia tsy mila mividy fitaovana manokana ianao. Mila mametraka azy amin'ny fitaovana Android fotsiny ianao ary manomboka milalao azy. Misy fanavaozana samihafa isan-taonina izay natao tamin'ity lalao ity, izay ahafahanao mankafy milalao azy io bebe kokoa.
Topimaso momba ny Super Mario 3 Apk
Izy io dia rindrambaiko filokana Android, izay manolotra ny sehatra filalaovana traikefa nahafinaritra indrindra. Manolotra tany nofinofy misy holatra, izay tsy maintsy vitan'ny mpilalao tsirairay. Manolotra tantara mitantara mahaliana izy io, izay tokony harahin'ireo mpilalao ary hatrehiny hatramin'ny farany.
Misy lalan-tantara samihafa azo alaina amin'ity dikan-teny ity, izay azon'ny mpampiasa ampiasaina sy ahatongavana amin'ny farany. Hevitra fanaovana fifanakalozan-kevitra marobe, izay ahafahan'ny mpampiasa manova mora foana ny lalana ary mahazo traikefa hafa. Fantatrao fa manolotra safidy mpilalao roa izy io, izay ahafahanao milalao azy mora foana miaraka amin'ny namanao na ny namanao.
Mila manomboka mamorona ny lalao Super Mario 3 voalohany ianao ary mamita dingana samihafa. Hahazo vola madinika sy holatra mahery ianao. Ny vola madinika volamena dia tsy maintsy angonina avy amin'ny sakana manokana amin'ny lalana mankany amin'ny iraka rehetra. Azonao atao ny manangona ny vola madinika izay ho isaina amin'ny faran'ny lalao rehetra ary hahazo isa bebe kokoa amin'izany ianao.
Noho izany, hampitombo ny herinao ireo holatra manokana. Hanana angovo fanampiny ianao, amin'izay ahafahanao mitsambikina avo kokoa, manapaka sakana bebe kokoa, ary mampitombo ny haavonao koa. Izy io koa dia misy teboka miampy iray hafa, izay fiainana fanampiny.
Misy ihany koa ny sakana samihafa amin’izany Lalao 2D, izay ahitana sokatra, holatra ratsy, voninkazo, afo, ary fahavalo hafa. Raha mifandray mivantana amin'ny iray amin'ireo ianao dia ho very ny ainao, fa raha nihinana holatra manokana ianao dia ho very ny haavonao sy ny herinao.
Noho izany, misy zavatra mahavariana hafa taonina, izay azonao zahana sy ankafizinao amin'ny filalaovana ity lalao ity. Noho izany, sintomy fotsiny ny Super Mario 3 Ho an'ny Android ary ankafizo. Raha mila fampiharana bebe kokoa ianao dia azonao atao ny mitsidika ny tranokalanay sy mahazo fampiharana mahavariana eto.
anarana Super Mario 3
Anaran'ny fonosana com.happy_world.nesemu.n27.nes
Developer Tontolo sambatra
Ilaina ny fanampiana kely indrindra 4,0 sy ambony
Raha te-hisintona ny rakitra Apk ianao dia tsy mila mitsidika tranokala marobe. Izahay dia hizara ny kinova farany an'ity rindranasa ity aminareo rehetra. Mila mahita ny bokotra fampidinana fotsiny ianao, izay misy eo amin'ny ambony sy ambany eto amin'ity pejy ity.
Super Mario 3 Apk no fampiharana lalao tsara indrindra hankafizana ny fotoana kalitao. Noho izany, sintomy ity fampiharana ity ary zahao ny tontolon'ny holatra. Vonjeo izao tontolo izao ary ankafizo ny fiainanao. Raha manana fangatahana ianao dia aza misalasala mifandray aminay, amin'ny alàlan'ny fizarana fanehoan-kevitra etsy ambany.
Sokajy Games, Adventure Tags Lalao 2D, Super Mario 3 Apk, Super Mario 3 Ho an'ny Android, Lalao Super Mario 3 Post Fikarohana
Pokemon Unite Apk Download ho an'ny Android [2022 Update]